Restaurant Iveki In The Netherlands | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Restaurant Iveki In The Netherlands
Restaurant Iveki In The Netherlands
Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/06/2020)
Ukuba ubuzifihla ukuba uceba uhambo oluya Amsterdam kodwa wokuqonda ixesha engcono ukuya, Unga ufuna ukuqwalasela utyelelo ngeVeki Restaurant 2019 e Netherlands.
Iveki Restaurant sisiganeko zokupheka ukuba lwenzeka ngonyaka kulo lonke ihlabathi 35 imizi emikhulu efana Amsterdam, Inew York, no Hong Kong. IVeki Irestyu lokuqala lwenzeka eNew York; wadala ngu Tim Zagat, umsunguli Zagat Survey, Joe Baum, restaurateur ohloniphekileyo.
Le veki yaba yimpumelelo kangangokuba lithe laqhenqetha ngaphesheya kwezinye izixeko kwihlabathi jikelele. Imihla weVeki Restaurant ziyahluka ukusuka kwizixeko ngezixeko; kunjalo, ingqiqo ongowona efanayo kuzo zonke iindawo. eateries inxaxheba ekukhuthazeni ngeveki ezifundisa sasemini isidlo specials ngamaxabiso enomtsalane.
Amsterdam Week Restaurant 2019
Ukuba u abathanda ukutya kwaye wena lusebenza kuphela, Iveki Restaurant ikunika ithuba wasoloko zokudlela phezulu e Amsterdam ngexabiso ngesaphulelo. Bambani ithuba ukutya yohlobo Le Garage, i Brasserie La camelia e Okura Hotel, okanye Brasserie kwi Amstel Hotel for ngaphantsi!
Ingxenye best ukuba Week Restaurant National kwenzeka e Amsterdam kabini ngonyaka, entwasahlobo waphinda ekwindla. amaxesha kabini ngonyaka, restaurants zonke phezu Enetherlands kuba iveki-elide iziganeko apho unako bonwabele epheleleyo ikhosi ye-nsnp ngeqhekeza into babeya ngokuqhelekileyo iindleko. Yonwabela sasemini Ikhosi-3 € 28,50 kuphela!
Malunga 135 zokudlela lonke Amsterdam inxaxheba leyo yenza ukhetho lwakho yayenza. Isiganeko kabini ijolise lula amava. Yidla usele kumaziko Amsterdam lokutyela intle ngokuthi kweesampula lwemenu yabo ngexabiso esisigxina. Akukho xesha kukulungele ukuba uxhamle izitya yokutyela utyikityo ukuba ehlawulelwayo ahlawule ixabiso epheleleyo ngexesha naliphi na ixesha lonyaka.
Kodwa ngaphambi kokuba ndonwabe kakhulu, uqaphele ukuba azihambi nje kwezi zokutyela kwaye silindele ukuba phantsi. Ugcino kuyimfuneko, ngoko kufuneka incwadi kwangethuba kangangoko unako njengoko ezi ndawo zikholisa ukuba azalise ngokukhawuleza.
Antwerp ku Amsterdam Train
Lille ukuba Amsterdam Uqeqesha
Indlela Fumana kwiVeki e The Netherlands
Nangona kukho iindlela ezininzi okuhambela ukufumana ukuba isiganeko Amsterdam Week Restaurant, umdla train yenye yeendlela ezininzi obonwabisayo umdla ku uhambo. It yenza ulwazi lonke ukhumbuleka kakhulu yakho ahambe lonke elaseYurophu, ngokungenisa ozibonayo efika kwakho indawo ezizwe akuthandeki kunye nentuthuzelo.
Enye yezona zinto zibalaseleyo xa uhambo Europe kukuba akukho mfuneko ukuba ukutshintsha imali yakho, kuyo yonke into efanayo.
Hanover ku Rotterdam Uqeqesha
Dortmund ku Rotterdam Uqeqesha
EHamburg Rotterdam Uqeqesha
Cologne ku Rotterdam Uqeqesha
EParis ku Amsterdam ngololiwe simalunga 3 iiyure nesiqingatha lo gama EBerlin ku Amsterdam i iyure-6 uhambo ngololiwe. Incwadi ekuseni Ukugcina kumaxabiso itikiti. Jonga imihla Week Restaurant 2019 e The Netherlands ukuze ungakwazi bebeka izihlalo zakho uloliwe kwangaphambili enjoy yokonga ezinkulu. Fumana iirhafu eziphezulu kwi uhambo ngololiwe Gcina A Isitimela
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/restaurant-week-netherlands/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Eyona Wineries Aseyurophu Njani Ukufumana Apho
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
Iindawo ezinika umdla To The Black Forest Germany
Qeqesha uhambo eJamani, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe